UNHCR: Yurub halaga Dhiso Xeryo Qaxooti
Hay’adda Q.M u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, ayaa ku baaqday in Giriirga, Talyaaniga iyo Hungary laga dhiso xeryo waaweyn oo qaxootiga lagu qaabilo.
Hay’adda Q.M u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, ayaa ku baaqday in Giriirga, Talyaaniga iyo Hungary laga dhiso xeryo waaweyn oo qaxootiga lagu qaabilo.Hay’adda Q UNHCR waxay kaloo soo dhaweysay soo jeedintii midowga Yurub ee aheyd inay qaabilayaan 160 kun oo qof oo qaxooti ah.
Hay’adda Q.M u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, ayaa soo dhaweysay soo jeedintii midowga Yurub ee Jimcihii taas oo aheyd inay qaabilayaan 160 kun oo qof oo qaxooti ah, iyadoo sidoo kale ku baaqday in laga sameeyo waddamada Giriigga, Talyaaniga iyo Hangeri oo ah ilinka ay qaxootigaaasi soo maraan xarumo weyn oo qaxootiggaasi lagu soo dhaweeyo.
Sidoo kale UNHCR, ayaa soo dhaweysay yabooha Washington ee ku aaddan inay qaabilayaan 10 kun oo qaxooti Siiriyaan ah, waxayna sheegtay in Mareykanku ay tahay inuu sameeyo islamrkaasina uu sameyn karo intaa ka badan.
Qorshaha qaabilaadda tobanka kun ee qaxootiga, ayaa waxa ku dhawaaqay Josh Earnest, oo ah afhayeenka aqalka cad, isagoo sheegay in ay sii kordhin doonaan taageerada bini aadannimo ee ay u fidinayaan Siiriyaanka ka soo baxsanaya colaadaha.